BURULAŞ na BUDO Nkwado Bursaspor | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara16 BursaBURULAŞ na BUDO Nkwado Bursaspor
BURULAŞ na BUDO Nkwado Bursaspor
14 / 09 / 2019 16 Bursa, Burulaş, General, Ụzọ Awara Awara, oru, Mpaghara Marmara, Turkey
tumasiin na bursaspor na-akwado
Nkwekọrịta nkwado n'etiti Bursa Metropolitan Municipal na Bursaspor Club bịanyere aka na Bursa Mayor Alinur Aktaş na Onye isi oche Bursaspor Club Mesut Mestan. Onye isi ala Aktaş, ekwesịrị iwepụ Bursaspor site na obodo site na nkwado nke Bursaspor na ebe ka mma, o kwuru.
Bursa Mayor Alinur Aktaş, ụlọ ọrụ Bursaspor Özlüce na ndị otu nke ndị isi oche nke Bursaspor bịara nzukọ ahụ, biri Otu n'ime ụkpụrụ kachasị mkpa nke obodo anyị, anyị gbakọtara iji nye aka na ike na ike nke Bursaspor. Bursaspor bu ndi otu anyi na obodo mekorita ma nwe olu obodo anyi. Ndị otu niile nọ na Anatolia bara uru maka obodo ahụ, mana Bursaspor nwere uru na ịdị mkpa dị iche. Bursaspor bụ otu ndị nwetaworo ekele maka ọ bụghị naanị Bursali kamakwa ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ nwere nkwenye a. ”
"Ọganiihu nke Bursaspor bụ ihe ịga nke ọma nke Bursa"
Onye isi ala Aktaş, onye na-adọrọ uche na ntinye aka nke Bursaspor na football football kemgbe oge gara aga, rụtụrụ aka na ọtụtụ ndị egwuregwu Bursa dị mpako na-egwu n'egwuregwu bọọlụ dị mkpa. Of Bursaspor ọdịnihu na nri nzọụkwụ-mma na mgbe na-eme egwuregwu na ike ga-anọchi anya Turkey ná mba ọzọ Bursa salvaging President Aktas ekwu a ga-enwe, ebe ọ bụ na ụbọchị, ọ were onodu 22 ọnwa gara aga eti na Bursaspor support, bụkwa nke ọjọ na Bursaspor ndụ kwuru na ọ ga-adị nwa oge.
Maazị Aktaş kwenyere na Bursa nwere ike imeri asọmpi ọzọ wee sị, “Anyị na-ezute ihe isi ike site n'oge ruo n'oge. Ma nsogbu na nsogbu na-eme ka ihe ịga nke ọma bụrụ nke bara uru karị. Echefula nke ahụ. Ọganiihu nke Bursaspor bụ ihe ịga nke ọma nke obodo. Ya mere, nkwado nke mgbanwe niile nke obodo dị mkpa ma baa uru. Anyị ga-anọgide na-akwado ma na-akwado Bursaspor na usoro iwu. Anyi bu n’obi iwebata Bursaspor n’ebe kacha mma ”.
E mere ihe ọhụrụ
N'ikwu okwu n'egwuregwu Bursaspor (Bursa Metropolitan Stadium) ebe Bursaspor ka bụ onye na-akwụ ụgwọ, Maazị Aktaş kwuru, “A na-ekwu maka egwuregwu a n'oge usoro ntuli aka na ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị. ámá egwuregwu ebe egwuregwu na-egwuri na eze ebe ọ bụ na 2015 afọ, tụnyere ndị ọzọ na isi stadiums na Turkey, karịa ihe eji. Yabụ na nke a nwere ihe dị oke ọnụ. N'ihi eziokwu ahụ bụ na emeghị ego ahụ kpamkpam, ọnụ ahịa ego ahụ pụtara na obere oge. Ruo ugbu a, enwere otu ihe kegidere aka anyị. Agbanyeghị na anyị abịakọtala ọnụ na onye ọrụ nkwekọrịta ahụ ọtụtụ oge ma nwaa ime ihe na ezigbo okwukwe, yana n'ime usoro iwu, ọ bụ ezie na o nweghị otuto, ọ dị nwute na anyị enweghị ike ime ihe anyị chọrọ, anyị wee kwụsị nkwekọrịta ahụ ọnwa ole na ole gara aga. Izu gara aga, anyị nwere ọmịiko ọhụrụ. ”
Isi iyi agwo na 2020
N'ikwu na ya na-ezutekarị ajụjụ gbasara isi agụ iyi na egwuruegwu, Maazị Aktaş kwuru, Wenyị chọrọ ka egwuregwu egwuregwu a bụrụ uru maka Bursaspor na obodo ahụ. Aha ụlọ ọrụ egwuregwu ahụ na Bursaspor, bụ ndị na-ahụ maka ojiji ụlọ ọrụ nke nkwekọrịta ahụ nyere. E nweghị ụzọ anyị si echekwa ihe. Bursaspor bụ n'efu. Anyị enweghị mgbagwoju anya banyere aha, enwere ike inyocha aha a chọrọ ka ọ bụrụ na uru Bursaspor nwetara.
A ga-emecha isi ụlọ ọrụ egwuregwu a na mbido 2020 Aktas, nhazi nrụnye nrụzi na mmezi n'ime ámá egwuregwu ahụ, nhazi akụkụ gburugburu ebe obibi na ịnyefe ụlọ ọrụ nchịkwa a ga-arụ ọrụ n'etiti oke nkwupụta ọhụrụ a kwuru.
Acak ga-abụ ebe obibi ”
N'ikwu na ụlọ egwuregwu ahụ ekwesịghị ịbụ naanị oge egwuregwu kamakwa ebe obibi, Aktaş kọkwara nkọwa nke nkwekọrịta nkwado. Maazị Aktas, ọ bụ ezie na ọ bụghị n'okpuru ọrụ nke Obodo ukwu, Bursaspor'a iji kwado ámá egwuregwu ahụ, na-ezo aka n'ọrụ ahụ, “Egwuregwu, tupu egwuregwu ahụ na mgbe egwuregwu ahụ anyị na-eme usoro nhicha ọ bụla, ndị ọrụ 5 na-arụ ọrụ na 40 ụbọchị niile. BURFAŞ na-enye ọrụ nri n'oche nke 1963 guzo ma nọrọ na njikwa nke buffets na ámá egwuregwu na ọrụ nke ndị cops anyị. Anyị ga-eme ka nkwado anyị na Bursaspor site na nkwekọrịta nkwado. Anyị edeela nkwekọrịta na 3,5 nde TL banyere nkwado ụdị ahụ. A ga-enye 2,5 nde TL site n'aka ndị nkwado ma nweta 1 nde TL site na BUDO, ndị enyemaka nke BURULAŞ, nke na-enye ụgbọ njem n'obodo anyị site n'oké osimiri na ala. "
5,5 nde TL na-akwado Bursaspor
Mayor Aktaş, Bursa Metropolitan Obodo n'okpuru nduzi nke nkwado enyere site na uru nke ihe dị ka nde 5,5 TL, Bursaspor ga-abịa ebe kacha mma, ka o kwuru. Aktaş, 600 puku TL maka ihicha ama egwuregwu, 1 nde 200 puku TL maka inye nri na ile ọbịa, VUD obi BUDO VAT gụnyere 1 nde 200 puku TL na nde 2,5 TL gụnyere nkwado ego nke ndị na-akwado ya nyere ego niile gbasara ego 5,5 nde TL nkwado.
"Ka anyị chebe Bursaspor"
Maazị Aktaş chetara mgbali ndị ahụ iji kwado mkpọsa sms na inye ụmụaka pụrụ iche ụdị dịka onyinye iji bulie mmata banyere Bursaspor. "“Hụ Bursaspor adịghị na keyboard ahụ. Bursaspor bụ ezigbo uru. Bhụ Bursaspor n'anya bụ ịnwe. Ka anyị kwuo ụgbọ mmiri Bursaspor, na-emesi ya ike na ọ nwere ike ịga Super League site na nkwado nke ndị otu egwuregwu site na obodo niile.
Bursaspor nke akara Bursa na-akpọ maka nkwado
Onye isi oche nke Bursaspor Club Mesut Mestan kelere Mayor Aktaş maka nkwado ya na klọb ahụ wee sị, ız Anyị nwere onye isi ala nke hụrụ Bursaspor n'anya nke ukwuu ma ọ bụ oku ekwentị. Ka nkwado a gaa n’ihu. Nkwado nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị na ndị isi obodo dị mkpa. Anyị na-agbasi mbọ ike. Okwesighi ka ọnọdụ anyị. Na 2009-2010, anyị na-eji ịnụ ọkụ n'obi na ịnụ ọkụ n'obi na-arụ ọrụ na-atụle obi ụtọ Bursa. Anyi bu n’obi imeri otu isi n’isi na njedebe oge ozo wee nye Bursa ihe o kwesiri. Anyị na-akpọku ndị Bursa niile ka ha kwado Bursaspor, akara nke obodo anyị. ”
Mgbe ọ bịanyechara aka na usoro ahụ, eserese were foto ya na mpempe mgbasa ozi BUDO. Site na usoro nke BURULAŞ General Manager Kürşat Çapar bịanyere aka na ya, mgbasa ozi BUDO were ọnọdụ ya na Bursaspor jerseys. Çapar kwuru na ọ bụrụ na akwadoro ụlọ ọrụ ọhụrụ, ha nwere ike wepu ya dịka BUDO ọbụlagodi n'etiti oge a ma nwee ike ịkwado Bursaspor karịa.
BURULAŞ's Istanbul - Seaanakkale Oké Osimiri…
30 Nde Ndekota Lira Maka BURULAŞ
BURULAŞ Bursaspor kọwara!
Nkwa Prime Minista na-akwado Yildirim Ala Ala
Etinye ego na uzo ugbo ala Integrated Plant na Mardin…
President Erdoğan kwere nkwa maka Yıldırım Metro
Onye isi oche Atilla, maka Akpata Okpukpo nke Ala
TCDD Transportation na DEMARD Nkwado nkuzi
Onye isi MÜSİAD na Nyefe Adana Metro…
Nkwado Atalay Gaa na ndị ọrụ İZBAN
TÜRSAB Na-akwado Kayseri Tourism
5 oru iji meghee okporoko na Bursa Site Ankara…
Ihe Bursaspor Özlüce akụrụngwa
Onye isi oche Bursaspor Club
Ndị isi nduzi Bursaspor
Nkwado Ndị ọbịa Burula Bdan
Isi bụ isi nke Çetin Emeç ọhụrụ